Global Voices teny Malagasy » Ny Fanenon’ny Sabatra Faran’izay Maranitra, Naverina Nokiraina Tao Ejipta Mba Hanesoana Ny ISIS · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny Fanenon'ny Sabatra Faran'izay Maranitra, Naverina Nokiraina Tao Ejipta Mba Hanesoana Ny ISIS
Voadika ny 03 Marsa 2015 6:24 GMT 1	 · Mpanoratra Tarek Amr Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Iràka, Syria, Ady & Fifandirana, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika
Ejiptiana maneso ny “hiram-pirenen'ny” ISIS tamin'ny alàlan'ny fampakàrana lahatsary tao amin'ny YouTube, ahitàna ireo mpandihy miolankolana amin'ny tonon'ilay hira.
Tahaka ireo vondrona rehetra mpampihorohoro tsy mendri-piderana dia manana ny saina ho azy ny ISIS (na Daesh araka ny iantsoana azy amin'ny teny Arabo), mpitondra ny fanjakàna ary karazana hiram-pirenena. Amin'ny fotoana rehetra ahitàna lahatsary misy an-dry zareo manapaka lohan'olona, manapoaka baomba na mandoro olona, dia alefany ho feo lafika hatrany ny hiran-dry zareo hoe “Saleel Al-Sawarem”. Saleel Al-Sawarem, amin'ny teny Arabo, dia midika ara-bakiteny ho “ny feon'ny sabatra faran'izay maranitra.” Natao hamboly tahotra ao anatin'ireo mihaino azy ny tonon'ilay hira. Toy izao ny teny ao :
Ny fanenon'ny sabatra maranitra no hiram-pirenen'ireo olona sahy mirehareha.
Ny fitolomana no làlana iray hiainana ny fiainana tokony hiainany.
Eo anelanelan'ny fanafihana sy fandevonana ny mpanao jadona,
Ary ny feo mahafinaritry ny basy iray nampanginina.
Ampahany amin'ireo efatra efa navoaka  ilay hira, izay tsy misy tsy mahery setra na iray aza. Kanefa, vao haingana, nivoaka tamin'ny endrika fanadrohadroana teny anivon'ireo mpampiasa media sôsialy tao Ejipta ilay hira. Naverina nokiraina ilay hira ary natao ho feo lafika taminà rakikira misy fandihizana, ho toy ny fomba iray hanalàna baraka ny ISIS, ilay mpiara-dia amin'ny Al-Qaeda, izay efa mifehy faritra midadasika ao Iraka sy Syria. Amin'ny teny hafa dia asehon'ireo Ejiptiana fa tsy matahotra azy ireny ry zareo.
Nanao ity famerenana mikirakira ity i Karem Farok, nomeny ny anarana hoe Saleel Al-Sawarem – amin'ny gadona pop :
Ny hafa mampandihy kibo , na mamokatra lahatsary misy ireo mpampandihy kibo, miaraka amin'ilay hira alefa ao ambadimbadika ao :
Ary ny sasany mampiasa ny dihy avy aminà sarimihetsika Ejiptiana fa alefa ao ambadika kosa ilay hira :
Betsaka ny lahatsary no azo jerena ato amin'ity rohy ity  sy ity tenifototra ao amin'ny Twitter ity .
Tsy zavatra vaovao ny fanesoana ny ISIS sy ireo miaraka aminy. Kabary iray tsara lahatra ny hoe ny famoretana sy ny fahantrana no tena antony fototra mahatonga ny olona any amin'ny tany Arabo hanatevina laharana ny vondrona toy ireny. Indraindray dia lasa lavitra ny olona ary mampiasa ny famoretana ho toy ny fialàna olana ho azy ireo mba hanaovany ny ataony, tahaka ity mpampiasa Twitter ity, izay mampiasa ny solon'anarana Abu Anas:
Dia ahoana moa izany fa rehefa injay ireo voaporiporitra no miezaka mitolona hanaisotra ny tsy rariny iainany, raisina ho toy ny mpampihorohoro mampidi-doza ry zareo. Ny ISIS no firenena mampirehareha azy.
Herinandro vitsy lasa izay, niely be ny tenifototra “handeha hanatevina laharana ny Daesh aho “, ka amin'io no andefasan'ny olona ny bitsik'izy ireo toy ny hoe , “Nalain'ny rahalahiko ny fitaovana famahànako ary dia tsy mandeha intsony ny vatoaratry ny findaiko izao. Handeha hanatevina laharana ny Daesh aho”, mba hanalàna baraka ity tohan-kevitra ity.
Tsy voafetra ho ao Ejipta ihany ny fanesoana. Tao Etazonia, ny “Saturday Night Live” dia nanao hatsikana an-tsehatra momba ny ISIS .
Na izany aza, ny fanalàna baraka vondrona iray mpampihorohoro ary ny fanesoesoana azy ireny dia noraisina ho toy ny zavatra miabo ihany, saingy etsy ankilany, mampanahy ilay lahatsary notaterina ho nahitàna ankizy milalao ny ataon'ny ISIS sy ireo Nihàrany tao Ejipta , fa tsy ilay mahazatra ny maro milalao Polisy sy Mpangalatra.
Naneho hevitra momba ilay olana i Manaliana :
Tsy resaka vazivazy ny #ISIS  #prt 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/03/03/68026/
 Ampahany amin'ireo efatra efa navoaka: http://www.onmasr.com/videos/86144
 mampandihy kibo: https://www.youtube.com/watch?v=nrW8IWQjlVE
 ato amin'ity rohy ity: http://albedaiah.com/news/2015/02/28/83944
 ity tenifototra ao amin'ny Twitter ity: https://twitter.com/search?q=%D8%B5%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85&src=typd
 handeha hanatevina laharana ny Daesh aho: https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85_%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4?src=hash
 andefasan'ny olona ny bitsik'izy ireo toy ny hoe: https://twitter.com/youmnanabil2/status/568892314451636225
 hatsikana an-tsehatra momba ny ISIS: http://mashable.com/2015/03/01/snl-isis-parody/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link
 ilay lahatsary notaterina ho nahitàna ankizy milalao ny ataon'ny ISIS sy ireo Nihàrany tao Ejipta: https://globalvoicesonline.org/2015/02/22/how-isis-videos-made-children-slaughter-other-children-in-egypt/